Falal khatar ku ah Mudahaaarada Nabadeed ee Bulshaweynta.
Falal khatar ku ah Mudahaaarada Nabadeed ee Bulshaweynta.
Thursday October 19, 2017 - 12:52:10 in by Samiir Cabdi
Falal khatar ku ah Mudahaaarada Nabadeed ee Bulshaweynta. Waxa goloha bulshada iyo dhalinyarta Somaliland soo gaadhey ama ay ogaadeen in xukuumadu hoosta amar ka siisey hogaanka Booliska iyo Ciidamada
Waxa goloha bulshada iyo dhalinyarta Somaliland soo gaadhey ama ay ogaadeen in xukuumadu hoosta amar ka siisey hogaanka Booliska iyo Ciidamada qalabka sidaa in la joojiyo lagana hortago mudaharaadkii nabadeed ee bulshadu ay ugu talo gashey in ay qabsato.
Awaamiirta la siiyey wax ka mid ah in ciidamada RRU iyo taliska nabsugida ay diyaar u noqdaan waxa allaale wixii urur u muuqda. Waxa kale oo labadaas kooxood iyo booliska la amrey in gacan bir ah lagu qabto cid allaale cidii loo arko in ay waxa abaabulayaan ama qoraal ha noqoto ama qaab kale.
Waxa warqad humaag ah loo qorey oo ay xukuumadu u qortey he’yadda ururka Europe iyo UNta taas looga dan leeyahay in indho sarcaad loo dhigo hey’adaha in xukuumadda ay sida ugu sareysa u illaalineyso xuquuqul insaanka iyo gudashada doorashada. Waxay ku qoreen warqada in xukuumadu ay qaban doonto xag-kale jiraha keliya taas oo la rabo in mucaaridka oo dhan laga dhigo xag-kale jire oo la yidhaa waa kooxihii ku adeegsanayey diinta. It is preemptive move!
Waxa goloh bulshadu warqad u direen culimaau-diinka oo ay ka doonayaan in la bilaabo hanuunintii iyo ducadii jimcahan fooda inagu haya. Waxa kale oo warqadaas loo direy culimaaudiin kale oo degan diasporaha ama qurbo-joog ah.
Waxa la isku haya in wasiiradda hadda jooga iyo kuwa gudoomiyayaasha golaha degaanada is bedel lagu sameeyo, hey’adaha addunkana qaar baa ku dhiiri-galinaaya in taas uu odeygu sid deg deg ah u sameeyo……………..laakiin way ku adag tahay. Waxa laga yaabaa in isbedel yar oo aan miisaan badan lahayn la arko.
Waxa golaha bulshadu iyo dhalinyarta ay diyaarinayaan codsi gaar ah oo loo diraayo hey’adaha caalamiga ah in si dhaqso leh u soo magacaabaan kormeerayaal agfadhiista komishanka doorashooyinka oo si weyn looga deyrinaayo, cabsida ugu badanna ku haya ummaddan reer Soomaliland.
Foojinnaanta ha la kordhiyo, fiirada ha la dheereeyo, footkana ha loo diyaar-garoobo!!
Deganaansho, dulqaad, daryeel, dab-damin, iyo dalaalimo yaan Eebe beryeynaa!!